समृद्धिका लागि व्यावसायिक शिक्षा अपरिहार्यः शिक्षामन्त्री - Everest Dainik - News from Nepal
समृद्धिका लागि व्यावसायिक शिक्षा अपरिहार्यः शिक्षामन्त्री
महोत्तरी, असार १० । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समृद्धिका लागि व्यावसायिक शिक्षाको प्रवद्र्धन आवश्यक भएको बताएका छन् । आज बिहान महोत्तरी जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिका–५ सीतापुरस्थित माध्यमिक विद्यालय भङ्गाहा, सीतापुर, सिद्धपुरको निर्माणाधीन कृषि शिक्षा भवनको निरीक्षणपछि अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई मन्त्री पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् । सो माविमा कृषि विषयको पठनपाठनका लागि मन्त्री पोखरेलकै सिफारिसमा संसदीय विकास कोषबाट रु ७० लाखको लागतमा नयाँ भवन बन्दैछ ।
याे पनि पढ्नुस संघीय शिक्षा नीति चाँडै पारित हुन्छः शिक्षा मन्त्री पाेखरेल
याे पनि पढ्नुस शिक्षामन्त्री र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
याे पनि पढ्नुस मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘चिकित्सा विधेयक डा. केसीकै योगदानले पास भयो, अब अनसन फिर्ता लिए हुन्छ’
ट्याग्स: Girirajmani Pokhrel